PressReader - Ilanga: 2019-01-10 - Yehlukene imibono ngokuqedwa kwama-straw
Yehlukene imibono ngokuqedwa kwama-straw
YEMUKELWA ngezindlela ezahlukene eminye yemizamo yokuhlenga imvelo emhlabeni jikelele, okubikwa ukuthi liphezulu kakhulu izinga lokunukubezeka kwayo (imvelo). Isinqumo sakamuva esithathwe ngabanye bezindawo zokudlela ( restaurants) sokuqeda ngamaplastic straw kasehli kahle kubantu abathile. Indaba yokuqedwa kwama- plastic straw isematheni kulezi nsuku emhlabeni jikelele, kanti amanye amazwe amatasa avivinya imithetho yokuba kuvalwe ukusetshenziswa kwama- straw akhandwe ngoplastic. Eminye imibono ithi makuphele ukusetshenziswa kwe- straw kanye bese silahlwa. Abanye futhi bathi uma umuntu ezodinga i- straw akaziphathele esakhe. Ezinkundleni zokuxhumana baningi abantu asebezwakalise izimvo zabo ngalesi sinqumo sokuqedwa kwama- straw angama- plastic.
Ezinye zezindawo zokudlela sezisebenzisa ama- straw enziwe ngephepha ngenhloso yokuqeda ngoplastic njengoba ungenye yezinto eziyinkinga emhlabeni ezinukubeza imvelo.
Kulolu hlobo olusha lwama- straw oselusetshenziswa kwezinye izindawo kukhona olwakhiwe ngalo iphepha ( paper straws), olwakhiwe ngesihlahla uqalo ( bamboo straws), kanye nolwakhiwe nge- glass ( glass straws).
Labo abagxekayo bathi ukusetshenziswa kwama- paper straw ezintweni ezifana nama- milkshake kakulungile ngoba avele abe manzi bese kungabe kusaphuzeka kahle. Abanye bakhala ngokuthi ayahlephuka, bathi kungcono ukuba sivele singabi khona i- straw ngoba kuyaphuzeka ngaphandle kwaso.
Kwezinye izindawo awusanikwa i- straw uma uthenga isiphuzo. Ngesonto eledlule kuke kwasabalala i- video yekhasimende lakwaMcDonald phesheya kwezilwandle lilwa nesisebenzi sakule ndawo ngoba lifuna i- plastic straw.
Kuzokhumbuleka ukuthi le ndawo yokudla ingenye yezindawo esezijoyine umkhankaso wokuqeda ngama- straw e- plastic. U- plastic uthathwa njengenye yezinto eziyingozi kakhulu kwimvelo futhi ezihamba phambili ekunukubezekeni kwayo, ikakhulukazi kwimvelo yasolwandle.
Ngo-2017 iNingizimu Afrika ijoyine ingxenye yamazwe angu-193 ngaphansi kwe-United Nations asayine isibophezelo sokuzama ukunciphisa inkinga yokulahlwa kukadoti kanye nezicucu zo- plastic olwandle.
NgokweUN Environment Programme (UNEP), uma kubhekwa izinga lokugcola njengamanje, kuyoshaya unyaka ka-2050 kugcwele o- plastic ukwedlula ofishi olwandle. Uma u- plastic ususolwandle kubikwa ukuthi ungathatha iminyaka engaphezu kuka-100 ukuba ubole. Ulokhu ucosuka kancane, udliwe yizilwane eziphinde zidliwe ngabantu, okungadala ukuthi nabo babe sengcupheni. UHLOBO OLUSHA LWAMA-STRAW Abeseka umbono wokusungulwa kwalawa ma- straw bathi mahle ngoba awahlephuki ngokushesha futhi akunika isikhathi esingangehora sokuphuza kahle isiphuzo sakho. Akhiwe ngokwemvelo kusetshenziswa uqalo futhi kuthiwa ehlisa amathuba okuba umuntu agcine egwinye amakhemikhali.
Anesikhathi esikaleliwe akwazi ukusihlala njengoba kuyinto eyimvelo. Kodwa-ke okuhle kakhulu wukuthi uqalo luyakwazi ukubola uma usululahla, alufani no- plastic. Abukeka kahle futhi ayakwazi ukuphinde ase benziseke, kawanabo ubuth kwimvelo. Uyakwazi ukuwawash futhi kawazweli ezintweni ezishisayo.